कोरोना ‘डेन्जरजोन’ मा प्रधानमन्त्रीकै गृहनगर, संक्रमण फैलिन नदिन ‘विशेष’ तयारी – Health Post Nepal
२०७७ वैशाख १४ गते १८:०२
हटस्पट बाँके : कसरी फैलिँदैछ संक्रमणको डढेलो?
झापाको दमकमा एकजनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि जिल्लैभरि व्यापक सतर्कता अपनाइएको छ। यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहनगर पनि हो।
शुक्रबार दुई जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएपछि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय झापाले सम्भावित जोखिमको क्षेत्रमा र्‍यापिड टेस्ट र अन्य आवश्यक परीक्षणलाई तीव्रता दिएको हो।
प्रधानमन्त्री ओलीले पनि स्वास्थ्य सुरक्षाको सम्पूर्ण गर्न निर्देशन दिएपछि काममा तीव्रता दिइएको हो। स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने निकाय र प्रशासनले जिल्लाका दमक, हल्दिबारी लगायतका स्थानलाई विशेष प्राथमिकता दिएर परीक्षणको कार्य सुरू गरेका छन्।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय झापाका प्रमुख ईश्वरी पौडेलले कोरोनाको सम्भावित जोखिम कम गर्नका लागि सम्पूर्ण संयन्त्र र जनशक्ति परिचालन गरिएको जानकारी दिएका छन्।
झापाका मुख्य नाकाबाट हुनसक्ने आवतजावत रोक्न र बाहिरबाट प्रवेश गरिसकेका व्यक्तिहरूको सूची तयार गरेर परीक्षणका कार्य गरिरहेको पौडेलले बताए।
झापाका काकरभिट्टा, भद्रपुर, गौरिगञ्ज लगायतका प्रमुख नाका र अन्य सम्भावित नाकाहरूमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको टोली परिचालन गरिएको छ। त्यसैले अब जिल्ला प्रवेश गरिसकेका व्यक्तिहरू प्रशासन र स्वास्थ्यसम्बन्धी निकायको निगरानीमा छन्।
फिबर क्लिनिक सञ्चालन गरी परीक्षण
झापामा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले पहिलो चरणमा फिबर क्लिनिक सञ्चालन गरी स्वास्थ्य परीक्षणको कार्य प्रारम्भ गरेको छ। फिबर क्लिनिक सञ्चालन गरेर वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किएका र भारतबाट फर्किएका व्यक्तिहरूलाई क्लारेन्टाइनमा पठाइएको थियो।
‘फिबर क्लिनिक सञ्चालन गरेर भारतबाट आएका र तेस्रो मुलुकबाट फर्किएका व्यक्तिको स्क्रिनिङ गरी क्वारेन्टाइन र होम क्वारेन्टाइनमा राखौँ,’ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय झापाका फोकल पर्सन जीवन चौलागाईले भने, ‘दोस्रो चरणमा र्‍यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट सुरू गरिएको थियो, जम्मा ८ जनाको परीक्षण गर्दा ४ जनामा पोजिटिभ आयो।’
र्‍यापिड टेस्टमा पोजिटिभ आएका ४ मध्ये एक जनाको पोलिएमरेक्स चेन रियाक्सन पिसिआर गर्दा नेगेटिभ आएको चौलागाईले बताए। ८ सयमध्येमा पनि एक सय १० जनाको पिसिआर टेस्ट गर्न पठाएको उनले बताए।
एक सय १० जनामध्येमा पनि ३ जनाको पिसिआरमा पोजिटिभ आएपछि परिवारका सम्पूर्ण सदस्यको परीक्षण गरिएको र त्यसमा दुई जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ।
‘संक्रमितको निगरानी गर्ने, सम्पर्क व्यक्तिहरूको टे«सिङ गर्ने र पोलिएमरेक्स चेन रियाक्सन पिसिआर परीक्षण गर्न पठाउने कार्यमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको छ,’ चौलागाईले भने।
फिबर भएका मानिसहरू धेरै नभएको र र्‍यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट भएका मानिसहरूमा पनि लक्षण केही नदेखिएको फोकल पर्सन चौलागाईले बताए। झापामा दुई जनाबाहेक अन्यमा कुनै किसिमको शंकास्पद संक्रमण नदेखिएको जानकारी उनले दिएका छन्।
‘अब नयाँ रणनीतिका साथ जान्छौँ, कन्ट्याक ट्रेसिङमा कसरी जाने भन्ने र निगरानीको विषयमा उच्च प्राथमिकताका साथ काम सुरू भएको छ,’ उनले भने।
चौलागाईका अनुसार झापामा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको नेतृत्व जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय र प्रशासनिक निकायहरूसँग समन्वय गरी कोरोनाको संक्रमणको जोखिम फैलिन नदिने प्रयास भइरहेको छ।
र्‍यापिड टेस्ट र पिसिआर टेस्टमा अन्तर किन?
र्‍यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट र पोलिएमरेक्स चेन रियाक्सन पिसिआरमा केही अन्तर हुन्छ। ¥यापिड टेस्ट ‘एन्टीबडी’ टेस्ट हो।
‘हाम्रो शरीरमा कुनै कारक तत्व प्रवेश गर्‍यो भने शरीरमा एन्टीबडी बनाउनका लागि समय लाग्छ, यो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतासँग सम्बन्धित हुन्छ,’ फोकल पर्सन चौलागाईले भने, ‘हल्दिबारीमा संक्रमण देखिएका व्यक्तिमा र्‍यापिड टेस्टमा पोजिटिभ देखायो, पिसिआरमा नेगेटिभ देखायो, विदेशमै संक्रमण भयो र त्यही निको भयो, या नेपाल फर्किएपछि पनि आफै निको भयो।’
तर, परिवारका सदस्य कसैलाई पनि संक्रमण नदेखिएको चौलागाईले बताए। र्‍यापिड टेस्टमा पोजिटिभ देखिएपछि उनकी श्रीमतिसहित परिवारका सदस्यको ¥यापिड र पिसिआर टेस्ट गरिएको उनले बताए।
दमकमा संक्रमण देखिएका व्यक्ति डेढ महिना अघि विदेशबाट घर फर्किएका हुन्। तर, उनका आमा र बुवालाई सरेको पाइयो। ‘१५ दिनपछि एन्टीबडी निर्माण हुने भएकाले तत्कालै संक्रमण छ कि छैन भनेर हामीले पिसिआर टेस्ट गरेका थियौँ, त्यसमा पोजिटिभ देखियो,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गृहनगरमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि सतर्कता बढाइएको छ। पूर्वी नाका काँकरभिट्टा पूर्ण रूपमा बन्द छ। मोरङसँगको पश्चिमी सीमा र इलामसँगको उत्तरी सीमा क्षेत्रबाट ‘पास’का सवारीसाधन प्रवेशमा पनि कडाइ गरिएको छ।
झापामा ७ सय बेडको क्वारेन्टाइन
झापामा २२ वटा क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको छ। स्थानीय तहले निर्माण गरेको क्वारेन्टाइनमा ७ सय बेड क्षमता छ। अहिले ती क्वारेन्टाइनमा १ सय ३३ जनालाई राखिएको चौलागाईले बताए।
होम क्वारेन्टाइनमा पनि झण्डै ७ सय जनालाई राखिएको उनले बताए। ११ सयलाई क्वारेन्टाइन र निगरानीमा राखिएको भए पनि १४–१५ दिनपछि र्‍यापिड टेस्टमा संक्रमण नदेखिएपछि अन्य बिदा गरिएको चौलागाईले जानकारी दिए।
‘क्वारेन्टाइनमा बाहिर जिल्लाका पनि थिए, उनीहरूलाई बसको व्यवस्था गरेर पठाइयो,’ चौलागाईले भने, ‘भद्रपुरस्थित मेची अञ्चल अस्पतालमा २५ बेडको आइसोलेसन निर्माण गरिएको छ, दमक अस्पतालमा दुई बेडको आइसोलेसन छ, कसैलाई संक्रमण भएमा तत्कालै राख्न सकिने गरी व्यवस्था गरिएको छ।’
चौलागाईका अनुसार पोलिएमरेक्स चेन रियाक्सन पिसिआर र ¥यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट गरेर झापामा ७ सय ९२ जनाको टेस्ट गरिएको छ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय झापाले महामारीको जोखिमलाई दृष्टिगत गरेर सीमावर्ती क्षेत्रका गाउँपालिका र नगरपालिकालाई उच्च निगरानीमा राखेको छ। ‘सुरक्षा र रोगको हिसाबले पनि सीमा क्षेत्रका गाउँपालिका र नगरपालिकालाई उच्च निगरानी गरिरहेका छौँ,’ उनले भने।
झापाका प्रमुख नाकाहरूमा सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ। नाकाबाट कोही प्रवेश गरेमा तत्कालै स्वास्थ्य जाँच र क्वारेन्टाइनमा उनीहरूलाई राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि, लकडाउनका कारण सीमावर्ती क्षेत्रमा कोहीलाई प्रवेश गर्न नदिइएको झापा प्रहरीले जानकारी दिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्लामा मात्रै नभइ देशभरि नै कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम हुनै नदिन उच्च प्राथमिकताका साथ काम भइरहेको बताए।
‘प्रधानमन्त्रीको गृहनगर भएकाले त्यहाँ बढी प्राथमिकता दिने भन्ने हुँदैन, देशैभरि उच्च प्राथमिकताका साथ काम भइरहेको छ, सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रमा सतर्कता र सावधानीका साथ काम गरिरहनु भएको छ,’ थापाले भने।
Tags: काेराेना, दमक, प्रदेश १